Hooyo Soomaaliyed oo wiilkeeda ku dhiira gelisay inuu qirto dambi | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Hooyo Soomaaliyed oo wiilkeeda ku dhiira gelisay inuu qirto dambi
Hooyo Soomaaliyed oo wiilkeeda ku dhiira gelisay inuu qirto dambi
Deeqo Xuseen waa hooyo Soomaaliyeed oo deggan dalka Mareykanka, waxa ayna ka mid tahay dadka carruurtooda hadda ka hor looga shakiyay in ay qaateen afkaarta kooxaha xag-jirka ahi ee ka dagaallamayay gudaha dalka Suuriya.
Balse haatan sida ay sheegtay dhibaato xooggan ayay kala kulmeysa bulshada Soomaaliyeed ee ay ku dhex nooshahay.
Deeqo oo dhawaan wareysi siisay warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in talo ay ku garab istaagtay wiilkeeda oo ahayd in uu qirto dambiga loo haysto ay haatan ku muteysatay in Soomaalida kale ay ku eedeeyaan in ay la shaqeyso mukhaabaraadka Mareykanka.
”Laba habeen ayaan sigtay oo nafteyda halis gashay oo la rabay in dhibaato laygeysto”. ayay intaasi ku sii dartay Deeqo.